Niampy enina ireo lavon’ny covid-19 : tafakatra 105 ireo matin’ny valanaretina, 413 ny tranga vaovao | NewsMada
Niampy enina ireo lavon’ny covid-19 : tafakatra 105 ireo matin’ny valanaretina, 413 ny tranga vaovao
Nihoatra ny 100, nanomboka omaly. Niampy enina indray ireo lavon’ny covid-19, araka ny tatitry ny CCO, omaly. Notsaboina tetsy Ando­hatapenaka sy HJRA ary Anosiala ny telo. Iray kosa tany Andrainjato Fiana­rantsoa ary ny roa tany Ma­hajanga sy Ambato Boeny. Tafakatra 105 izany izao ireo matin’ny coronavirus eto amintsika, hatramin’ny volana marsa no ho mankaty.
Avy eto Analamanga ireo tranga vaovao 388
Etsy an-daniny, miisa 413 ny tranga vaovao ka avy eto Analamanga ny 388 amin’izany. Miisa 13 ny any Alao­tra Mangoro raha sivy ny any Atsi­mo Andrefana. Fito ireo tranga vaovao any Matsiatra Ambony ary enina ny any Boeny. Miisa telo ny any Amoron’i Mania raha roa avy kosa ireo nifindran’ny valanaretina any Itasy sy Atsinanana. Ahitana tranga vaovao iray any Sava.
Miisa 94 ireo marary mafy « forme grave »
Nihena ho 94 ireo marary mafy « forme grave » ka avy eto Analamanga ny 79 amin’izany. Mitsinjara ho 64 etsy Befelatanana, miisa 15 eny amin’ny HJRA ary 13 ny eny Anosiala. Roa avy ny eny Fe­noarivo sy ny Homi, Soavi­nan­driana ary iray etsy Ando­ha­tapenaka.
Na izany aza, miisa 344 ireo sitrana ka tafakatra hatrany amin’ny 7 461 izany izao ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana.
Etsy an-kilany, miisa 10 748 ireo nifindran’ny coronavirus hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty. Mbola manaraka fitsaboana kosa ny 3 182. Mi­isa 40769 ny fitiliana vita, hatreto.